Indlu yeglasi yeTubular, umbono omkhulu wolu lwakhiwo lwaseTurkey | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uyilo kuyilo kufanelekile ngathi Umthombo omkhulu wokhuthazo. Xa umhlaba omtsha uyiliwe, ezinye iiplanethi okanye enye izama ukuya kwikamva, kukho abakhi abathile abasincedayo ukuba siyile le mvelaphi yomlinganiswa okwi-2100.
Umyili wezakhiwo u-Aibek Almassov yenye yezinto esinokuya kuzo ukuze sifumane izimvo zokuyila iprojekti yekhaya elitsha esiliqambayo okanye ukufuduselwa ezidolophini kuyilo olukhethekileyo apho siza kuthi sidibanise iintsapho ezininzi ukuba zijongise kumdlalo wokuhlekisa. Andazi, zizimvo ekugqibeleni kunye Indlu ka-Amassov tubular yintsusal kunye nesiseko solu ngeniso.
Yhe ndiyazi Indlu ngokwayo iyile kwaye inobuchuleNgolo bume betyhubhu, ukuyibeka phakathi ehlathini yenye ingcinga ephambeneyo. Eyilwe ngo-2013 kwaye ngaphandle kwenkxaso yemali ukuze ikwazi ukuyibeka kwindawo efanelekileyo ephuphwe ngumyili ngokwakhe, ekugqibeleni inokuba yinto esinokuyityelela ukuba siyama.
Kwaye kukho iinkampani ezininzi ezenza iikristali kunye neepaneli zelanga abo babonakalise umdla okhethekileyo yokuyixhasa ngezimali. Uluvo oluphambili lweprojekthi, ngokwamazwi ka-Almassov, kukubonelela ngenye indlela esixekweni. Hlanganisa uyilo lweshishini kunye nolwanamhlanje kunye nobuhle kunye nobutyebi bendalo kunye nasemaphandleni. Ukuphuma kwigrey kunye nekhonkrithi kunye nentsimbi yeyona njongo iphambili yale ndlu emile njengebhubhu kwaye igqunywe ngeglasi.
Nditsho nasembindini wendlu onayo umthi njenge-axis esembindini kuwo onke amagumbi kunye neembono ezintle onokuzifumana ngokuhlala kamnandi. Njengoko ihleli kuyilo, siyathemba ukuba ungabuya ngale migca uyibonise njengenyaniso enkulu, kuba kubonakala ngathi akukho lula ukwenza le projekthi.
Abo baphumeleleyo, kodwa kolunye uhlobo loyilo, zezi abaqulunqi bezi zibane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Indlu emile ityhubhu eyakhiwe embindini wehlathi